Socialbungy: Madal Suuq Ku Fekerkaaga | Martech Zone
Mar kasta oo xayeysiiya cusub uu iska diiwaan geliyo degelkeenna oo ay leeyihiin barxad suuq-geyn ah, waxaan inta badan qaadnaa quusin qoto dheer oo aan ku sameynaa qoraal ku saabsan iyaga. BulshadaBungy dhawaanahanba waan saxeexnay si aan u xayaysino sidaa darteed waan hubinay iyaga waxaanan dooneynay inaan kula wadaagno.
BulshadaBungy waa suuqgeynta dhacdooyinka iyo aaladda hoggaanka qabashada loogu talagalay ipadka (ama kaniini kasta & PC) loo isticmaali jiray in lagu qabto tartamada, xaaqmooyinka, iyo foomamka is-qoritaanka. Kufiican dallacsiinta dukaanka, kiishka, aqallada dhacdooyinka, ama xitaa bannaanka. Sii dadka sabab ay u soo booqdaan qolkaaga dhacdada ama kiishka:
44% booqasho sababtuna tahay kobcinta lasiiyay ama dallacaadda.
32% booqasho si aad u daawato macluumaadka sheyga.
13% booqasho si aad u aragto waxyaabaha ku jira is-dhexgalka.
11% booqasho si aad u daawato bandhig alaabeed.
Ma jiro wax horumar ah oo loo baahan yahay oo barxadda ayaa loo habeyn karaa astaantaada, oo ay ku jiraan sawirrada. Halkan waxaa ah dhacdooyin SocialBungy ugu habboon in la isticmaalo:
Dhacdooyinka Dhacdooyinka iyo Kiisaska - Ku beddel kuwa booqdayaasha ah ee soo-booqdayaasha ah, martida albaabka, ama is-dhexgalka astaamaha aad la kulanto inta lagu jiro dhacdadaada oo dhan tartan, foom is-qoris, ama dallacsiin kasta oo kale.
muujinaysaa Ganacsiga - Sii qolkaaga ganacsiga Show ka casriyeynta boodhadhka yar yar iyo sanaadiiqda bakhtiga. U isticmaal kaniinigaaga ama kumbuyuutarkaaga kumbuyuutar si aad ugu socodsiiso dhiirrigelin si aad si toos ah qolkaaga ugu qabato hoggaanka
Dukaan ku yaal iyo Tafaariiq - Ku orod ka qayb qaadashada dallacsiinta dukaanka halkaas oo aad ka soo qaban karto hoggaanka oo aad ugu beddeli karto dukaanka dhexdiisa.
Dhiirrigelinta Wadooyinka - Adeegso iPad-ka si aad ugu beddesho isdhexgalka asxaabta-kooxdaada kooxda horseedka iibka la taaban karo.
Muuqaalka ugu xiisaha badan ee SocialBungy ayaa ah inay diyaar u tahay adeegsiga kooxda. Qabashada adeegsiga Analytics shaqaalahaaga oo dhan, la soco saacadaha shaqsiyadeed ee ay leeyihiin, lana soco tirada gelitaannada urur kasta ururinayo.
Tags: waab dhacdodukaan ku jiradhaansadoqabashada hogaankadiiwaangelintatafaariiqdaKordhinta Iibkakooxda iibkabulsheeddukaankadallacsiinta waddooyinkakiniinbandhig ganacsi
Feb 5, 2014 markay ahayd 9:01 PM
Waad ku mahadsantahay wadaagida macluumaadkan Douglas. Daacadii daacad uma aqaano Socialbungy laakiin waan eegi doonaa tan dhowaan.
Feb 6, 2014 markay ahayd 3:38 PM
HI Barbara, waxaan ahay aasaasaha halkan SocialBungy. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad u baahato inaad ku dhex socoto si xor ah iigu soo dir emailkayga mbarwick@socialbungy.com